Ny minisitry ny fizahan-tany Kongo teo aloha dia notendrena ho any amin'ny Birao fizahantany afrikanina
Home » Travel Associations News » Ny minisitry ny fizahan-tany Kongo teo aloha dia notendrena ho any amin'ny Birao fizahantany afrikanina
Ny minisitry ny fizahantany teo aloha tany amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo, Andriamatoa Elvis Mutiri wa Bashara, dia notendrena ho amin'ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany (ATB). Izy dia hiasa ao amin'ny Birao ho mpikambana ao amin'ny Komitin'ny loholona amin'ny fizahan-tany.
Elvis Mutiri wa Bashara dia minisitry ny fizahan-tany taloha ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Ny zavatra niainany koa dia ahitana ny fananana ny toeran'ny lefitra nasionalin'ny tanànan'i Goma sy ny filoha lefitry ny Alliance for Development and the Republic.
Bashara dia nandefa ny bokiny fizahan-tany, "RDC: Fahafaham-bola amin'ny fizahan-tany", tao amin'ny Kempinski Hotel Fleuve Kongo ao Kinshasa nanatrehan'ny minisitra Jean-Lucien Bussa, ny minisitry ny fanjakana tompon'andraikitra amin'ny varotra iraisam-pirenena, miaraka amin'ny delegasiona 5 avy amin'ny ny "Edisionan'ny oniversite eropeana" any Alemana.
Holland America Line mizara zava-misy mahafinaritra 30 momba ny Nieuw Statendam
"Oscars" amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana dia mitondra ny hatsarana ho an'ny Birao Afrikana fizahan-tany